abanikazi Lemoto lapho esikhundleni ukubopha pads babhekana izingcwecwe zensimbi ezilula enikeziwe in the kit. Abantu abaningi abazi ngisho unake kubo, ucabangela izingxenye ngokweqile. Igama le ngxenye - protivoskripnye ipuleti ukubopha pads. Ingabe ukuhlanza creak? Uma kungenjalo, khona-ke ziyini na?
Protivoskripnye ipuleti ehlukile ngokuthi kulinganisa. indima yabo eyinhloko usabalalise imizamo piston ukubopha phezu bonke ubuso pad. Endabeni uthuli noma ukungcola ngokungabi bikho amapuleti ezinjalo kungenzeka kancane misalignment pads. Kucishe njalo kubangela umsindo ezingemnandi kusukela amabhuleki. Yingakho amapuleti abizwa protivoskripnyh.
Ngaphandle, abaprofethi bamanga yakhiwa izingxenye ezimbili bese wenza metal elincanyana (tin). Lezi zingqimba ulandele wabuka we pads wazihlephula, ezinza phansi kwesandla sayo eziphukile, eliseduze piston. Ingxenye efikayo contact ngqo piston ukubopha, ine uhlobo ipuleti okuqinile. Enye, eyakhelene block, lukathayela. Kuyinto nje kudingeka ukuba bakwazi ngokulinganayo ukusabalalisa amandla khona ukusilaphazeka.
Ukubukeka protivoskripnyh amapuleti ngokuvamile edukisayo. Izacile futhi engenangqondo, avame hhayi kunakwe futhi ayifakiwe. Lesi simo sengqondo nakho kunomthelela yokuthi okungekona umsuka ipuleti Ayibalwa. Futhi uma umnikazi imoto has a imoto kakade kanye indawo kule pads zinindwa, nokunye okuningi.
Eqinisweni, pads angeke creak ngaphandle amapuleti ezinjalo. Lokhu kungenxa izimo yokusebenza kahle imoto futhi isevisi ngesikhathi esifanele. Okungukuthi, uma unakekelwa kahle lobuchwepheshe, lapho bonke amabhuleki lihamba ngokucophelela njalo nivame.
Protivoskripnye ipuleti ezingemuva ukubopha pads ayatholakala yokuqala kuphela disc ezingemuva amabhuleki izimoto.
Skripun noma protivoskripnye ipuleti?
I kits esikhundleni pads ukubopha i disc amabhuleki babizwe ngokuthi skripuny. Bona akumelanga siphanjaniswe. Protivoskripnye ipuleti ukubopha pad Linings nesimo esifanayo futhi skripun kuyinto encane, ithini eyinkimbinkimbi lwalugobile. It efakwe ngokuvamile perpendicular eksisi eside pad nge priklopyvaniya noma prischolkivaniya.
Injongo ipuleti enjalo kuhlukile - ukuba Kunalokho, creaks lapho block eduze nemihuzuko, yingakho igama layo. Eqinisweni, luwuhlobo ezishibhile we inzwa ukubopha pad bafake. Wenziwe metal ezithambile, futhi awukwazi ukubekezelela ukufiphala kanye deformation ngoba ukubopha ezilengayo.
"Skripuny" e kits esikhundleni amabhuleki zivamile okuningi. Khiqiza kubo kanye izinkampane imikhiqizo okungekona okokuqala.
Ukumanzisa ngoba amapuleti
Le kit yasekuqaleni esikhundleni pads ukubopha njalo isikhwama esincane amafutha. Ngokuvamile bamane gcoba komzila. It kuvela ukuthi lokhu amafutha akhethekile ukuba asebenze ke protivoskripnye ipuleti. Ngoba ngaphandle kwalo ngeke behave fana ambalwa namakani nezinti kubangele umsindo esabekayo. Kuyinto sibonga okugcotshwayo okuyinto lisetshenzisiwe ipuleti lukathayela, futhi kukhona umphumela omangalisayo ngisho nemithandazo lesiyenta enhlitiyweni clamping pads.
Kuthiwani uma kungekho mnandi kuka amafutha protivoskripnye ipuleti ukubopha pads? Lokhu kungenzeka uma esikhundleni a okungekona okokuqala uma plate engaboshiwe. Uwoyela amapuleti ngokulungisa anezakhi ezikhethekile. Okokuqala, kuzomele kube okusezingeni eliphezulu, njengoba ukusetshenziswa esindayo disc amabhuleki kukodwa kungabonakala ukufuthelana phezu 500 ° C. Okwesibili, zokwenziwa base obalulekile kanye nokuntuleka ukuchayeka imikhiqizo iraba - anthers iziqondiso. Phakathi amafemu eyaziwa yokukhiqiza zokugcoba, eyaziwa Liqui Moly.
Into esemqoka akukona ukuthi zisebenzisa lithium futhi graphite zokugcoba ukuthi ayifanele lokushisa kanye zishe ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, babangela ukusonteka we anther zenjoloba. Asihambisani kanye nethusi amafutha. Zishe, namanje kuholela ukugqwala.
Noma mhlawumbe izandla zakho siqu?
Kuyinto ukuthi akukho kungenzeka oda isethi yokuqala ukubopha pads. Kulesi umndeni plate ntswininiza futhi ayiseyinhle kahle. Kulokhu, kunezindlela ezintathu kuphela aphume isimo yilezi:
Shiya konke njengoba kuba futhi musa ukushayela imoto, hhayi ezigugile ukubopha akwazi ukugcina.
Shintsha ikhithi ngaphandle amapuleti nje ukuqapha ngokucophelela isimo amabhuleki.
Hlakanipha futhi wenze protivoskripnye ipuleti ukubopha pads ngezandla zabo.
Lokho kungase kudingeke? Yebo ngokufanayo nje ukujiya tinplate ishidi. Ukuhlanganisa protivoskripnuyu ipuleti ubudala ngobumnene ahaqe nentaba yayo ipensela. Khona-ke, usebenzisa sikelo metal njengoba ipuleti ngokunembile cut. Ngemva kwalokho, ngokuhlanganisa ubudala futhi entsha ingxenye bese ucindezela ndawonye usebenzisa izibopho noma Vise, ukuletha ifayela ngengozi ephelele.
Ngokufanayo, kokubili zingqimba othathelwe ntswininiza. ipuleti lukathayela kwangaphakathi kuzodinga isikhathi esiningi kanye nesineke, kodwa uzokunikela phambi ukuphikelela kanzima. Kuyoba kuphela ukukhetha igrisi kwesokudla - futhi zonke. Manje wafiphaza pads noma ukusonteka APC endaweni lapho ukucindezela piston, hhayi esabekayo.
Yeka ukuthi kunzima kanjani ukuthola protivoskripnye ipuleti?
Indlela ezingavamile kits, okuyizinto protivoskripnye ipuleti ukubopha pads? Lapho kukhona imibuzo mayelana womshini amapuleti ngezandla zakhe? Eqinisweni, akukho rush. Lezi zingqimba zihlale isethi yokuqala esikhundleni ukubopha pads for disc amabhuleki. Lezi kits ayanikezelwa cishe yonke izimoto angaphandle Japanese. Intengo amasethi asemaphaketheni yasekuqaleni iphakeme kakhulu kunanoma iyiphi analog. Endaweni ehlukile, plate ngokumelene Uyaqina ngezinye izikhathi kwakuba nzima ukuthola.
Nalapha futhi, njengoba izimoto Japanese, lonke ulwazi olutholakala lwemibhalo sokuqala. Kukhona kulula ukuthola futhi uchaze eceleni inombolo okuyingxenye. Protivoskripnye ipuleti ukubopha pad "Toyota", isibonelo, ithengiswe futhi yayala ngokwehlukile.
Phakathi yezinkampani ezikhiqiza imikhiqizo okungekona okokuqala, TRW ivelele kahle. Ububanzi amaphakheji pads le nkampani zinamakhophi ephelele okwangempela, okuyizinto njalo samanje protivoskripnye ipuleti.
Nissan Protivoskripnye ipuleti
izimoto Japanese - zobuchwepheshe umkhiqizo. Sekuyisikhathi eside On izimoto eziningi ungowozalo Japanese esungulwe protivoskripnye ipuleti. Hhayi ukuba okungenasisekelo, thatha isibonelo Nissan Teana, 2006 ukukhululwa.
Faka yonke idatha ezidingekile, nokuthi Vin-inombolo noma inombolo chassis izimoto nge sangakwesokudla drive, sithola ukufinyelela okugcwele imoto esikhululekile izingxenye.
Coming ngokusebenzisa legatsha "unyathela amabhuleki uhlelo", ngaphandle nobunzima ukuthola phambi pad. Kukhona inombolo ikhathalogi pads ngokwabo - AY040NS106, okhanda okuyinto kunoma yiliphi esitolo online, uthole amanani kanye nemibandela kwezidingo izingxenye ezisele, kanye intengo kanye ukulethwa isikhathi unoriginal.
Protivoskripnye ipuleti ukubopha pads "Nissan Teana" Ubuye siqu inombolo yayo ikhathalogi - 41080AU025. Lokhu ikhithi iqukethe wonke amarekhodi esikhundleni pads: skripunu ezimbili protivoskripnye elinye libe ngelika-wheel ngalinye.
Protivoskripnye ipuleti ukubopha pads zisekhona ludale izinkundla yezimoto. Phakathi izimpikiswano kanye ngokumelene nenqubo eziyisisekelo ahlale ngemuva ukufakwa amapuleti ngaphandle kwabo. Ngakho, ingxenye amalungu iforamu waphawula koshintsho. Okusho ukuthi, njengoba pads creaking, futhi uqhubeke ugaye. Kodwa abaphikisi bathi Kulokhu kukhona ukungalungi kanye ukufakwa ukukhubazeka akuhlobene amapuleti.
Ingxenye abasebenzisi Internet itjheje kungenzeka ngokusebenzisa non-lwangempela ukubopha pads ngokumelene Uyaqina ngaphandle amapuleti. Kulokhu, kungekho msindo ngesikhathi operation ingekho. Uvela ngenhla, into batusa kuphela isitshalo ukukhiqiza, bese unquma ukufakwa kuyodingeka ngokwakho.
Uma ucabangela nezindaba ukusetshenziswa ipuleti anti-ntswininiza, zonke ngaphezulu uyaqaphela ukuthi akukho isinqumo sokugcina. Naphezu ethize izincomo automakers ukufaka izingxenye ezisele, abasebenzisi abaningi babe bebodwa, sihluke umbono olusemthethweni. Ndesuka: ukubopha pads, protivoskripnye ipuleti Lubrication - kungcono kukho olukhulu elikuvumela ukuba ujabulele yonke impumelelo yokucabanga lobuchwepheshe kanye ukugibela ngaphandle ntswininiza. Futhi kulabo abafisa ukusebenzisa amapuleti zikhona njalo ezinye izinketho.